बिपी कोभिड अस्पतालको हालतः अक्सिजनकाे पाइप छ तर, अक्सिजन छैन - Action Khabar - Nepali Online News Portal
कोभिड– १९ को दोश्रो चरणमा कोभिडका विरामी बढ्दै गएपछि धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि गम्भीर प्रकृतिका विमारी बढेका छन् । तर, प्रतिष्ठानले दाेश्राे चरणकाे महामारीमा काेभिड विरामीकाे स्वास्थ्याेपचार कसरी व्यवस्थापन गर्ने कुनै चासाे दिएकाे छैन ।
पछिल्लो समय मङ्लबारसम्म १० जना प्रतिष्ठानमा उपचार गराई रहेका सङ्क्रमितको मृत्यु भएको प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालले जनाएको छ ।प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरी शंकर साहका अनुसार हाल ८ जना आइसियु वेड, २२ जना एचडियु (हाई डिपेण्डेन्सी युनिट) वेड र १५ जना साधारण वेडमा उपचार गराइरहेका छन् । प्रतिष्ठनमा जम्मा १५ वटा आइसियु वेड रहेको छ ।
आइसियु बेडमा भेण्टिलेटरसहितको सूविधा रहेको छ । एचडियु वेडमा अक्सिजन जडान गरिएको छ । अक्सिजन पाइलाइनबाट जडान गरे पनि पाइपबाट अक्सिजन प्रवाह भएको छैन् । प्रतिष्ठान हातामा रहेकाे अक्सिजन प्लान्ट क्षमता भन्दा आधा पनि चलाइएकाे छैन । आफ्नाे अक्सिजन प्लान्ट विगारेर बाहिरबाट थप सिलिण्डर किनेर सेवा दिइरहेको छ । एक सय बेड क्षमता भएको प्रतिष्ठानमा पछिल्लो समय काेभिड विरामीको चाप बढेको भएपनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने पदाधिकारीलाई चासाे चिन्ता छैन ।
हाल भर्ना भएका प्रायजसो विरामी जटिल अवस्थाका रहेको प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डा. चुडामणि पोखरेलले जानकारी दिए।
४ महिना वित्दापनि एचडियु बेडले पूर्णता पाएन
प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालका लागि भनेर सरकारले बजेट उपलब्ध गराएपनि प्रतिष्ठानले एचडियुलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । प्रतिष्ठानले ठेक्का दिएको जनमुखी हेल्थ इण्टरप्राइजेजले एचडियुका लागि आवश्यक उपकरण ‘डिफिब्रिलेटर’ हालसम्म पनि उपलब्ध नगराएको पाइएको छ । तोकिएको पूरा उपकरण नहुँदा एचडियु नाम मात्रको भएको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी बताउँछन् ।
सप्लायर्सले उपलब्ध गराएका अन्य उपकरणहरू पनि गुणस्तरहीन रहेको कोभिड अस्पतालमा कार्यरत एक वरिष्ठ चिकित्सकले बताए। प्रतिष्ठानको मेडिकल स्टोर प्रमुख सञ्जीव कर्ण कोभिड अस्पतालको एचडियुका लागि अन्य सामान आएपनि डिफिब्रिलेटर हालसम्म नआएको बताउँछन्।
यसरी ठेक्का पाएको सामान समयमा उपलब्ध नगराउनेलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, प्रतिष्ठानले जनमुखी हेल्थ इण्टरप्राइजेजलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया त के अघि बढाउनु अर्को ठेक्का दिने तयारी गरेकाे छ । यसमा उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीका सचिवालयमा कार्यरत केही कर्मचारी र व्यापारीको संलग्नता रहेको बताइन्छ । कोभिड अस्पताल चुस्त दुरुस्त राख्ने जिम्मेवारी अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशंकर साहको हो तर उनिपनि ठेक्कापट्टाको कमिसनको चक्करमा लागेर प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
शव उठ्न महिनौ लाग्छ
कोरोना सङ्क्रमितको शव स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएका सङ्क्रमित बेडमा नै लामो समयसम्म राखिने गरेको छ । मृत्युपछि
नेपाली सेनालाई खवर गरेर शव व्यवस्थापनको लागि प्लाष्टिक प्याक बनाउनेदेखिको काम गर्दा र सेना आइ पुग्दा निकै समय लाग्छ । ३-४ घण्टासम्म पनि बेडमै शव हुँदा नजिक रहेका अन्य विरामीलाई मानसिक रुपमा आघात पुग्ने गर्छ । अब आफ्नो पनि यस्तै पालो आउने भयो भनेर नजिकका वेडमा रहेका सङ्क्रमित निराश मात्र होइन पीडामा हुने गर्छन् ।
११ दिनसम्म अक्सिजन बेडमा बसेर घर फर्केका धरान उपमहानगरपालिका न्यायपालिका सदस्यसमेत रहेका धरान–३ का विकाश बनेपाली आफु अस्पताल बस्दा कारुणिक अवस्था देखेको सुनाउँछन्। आफु अगाडी लास देखेरै पनि कतिपय मनोवल कमजोर हुनेहरुको मृत्यु भएको उनले सुनाए। ‘म अस्पताल बस्दा कहिलेकाँही त दिन भरीमा पनि लास उठेन । मृतकसँग बसेर आफ्नो पनि पालो कुरेर बस्नु पर्ने त्यहाँको कारुणिक अवस्था सम्झँदा अझै डर लागेर आउछ ।’– बनेपालीले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने ।
‘मृत्यु भइसकेका विरामीलाई अन्य वेडमा रहेका विरामीले थाहै नपाई तत्काल बाहिर लगेर व्यवस्थापन गर्ने मेकानिजम बिपी प्रतिष्ठानमा छैन । शव व्यवस्थापन तत्काल गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।’ झन साँझमा मृत्यु हुने सङ्क्रमितलाई रातभरी बेडमै राखिन्छ ।
विरामीको मृत्यु भइसकेपछि मुचुल्का उठाउने, प्लाष्टिक प्याक बनाउने तथा सेनालाई बोलाउने काममा प्रतिष्ठानले ढिलासुस्ती गर्ने गरेको बनेपालीको भनाई छ । यस्ताे व्यवस्थापन विरामी भन्दा अलग राखेर गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ । ‘नौ दिन अक्सिजन वेडमा बस्दा ८ वटा लास देखें । अब आफु पनि यसरी नै मरिने रहेछ । घर परिवारलाई अन्तिम सास जाँदा केही भन्न समेत पाइन भन्ने लागेको थियो । अरुको लास हेरेर म बाँचे ।’– बनेपालीले अस्पताल बसाईको कथा यसरी सुनाए,–‘११ औं दिन घर फर्कदा मृत्युसँगको युद्ध जितेर फर्केजस्तो लाग्यो । खुशीको सिमा रहेन । सरकार राजनीतिक खिचातानी छाडेर अस्पताल व्यवस्थापनमा लागोस । नेताहरुको पनि ध्यान जनता बचाउन जावस ।’
गत मङ्सिरमा १६ दिन कोभिड अस्पताल बसेर घर फर्केका अर्का उदयपुर चौडण्डी नगरपालिकाका मनोज राई अस्पतालमा भकाभक आफ्नै अगाडी काेभिडका विरामी मरेको देखेर आफ्नो पनि यसरी काल पर्खेर बसेको अनुभूति गरेको सुनाए । सप्तरी घर भएका एक वृद्धको सव ८ घण्टासम्म पनि बेड मै राखिएको पाएको उनले बताए। त्यहाँको त्यस बेलाको अवस्थामा आफु मुर्दा घरमा बसेको जस्तो लाग्ने उनकाे भनाइ थियाे।
अक्सिजन बेड अभावले दर्जनौको ज्यान गयो
पहिलो कोरोना महामारीको बेला बिपी प्रतिष्ठानको फितलो व्यवस्थापनका कारण बेड नपाएर झण्डै १५ जनाको ज्यान गएको थियो । कतिको घर मै मृत्यु भएको थियो । भने, कतिपय विराटनगर लाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको थियो । प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पताललाई सरकारले लेभल थ्रीको स्तरिय अस्पताल घोषणा गरेपनि यहाँको सेवा सुविधा उपकरण व्यवस्थापन भने नभएको उपचारमा आउने सङ्क्रमितहरुले बताएका छन् ।
धरान– ८ का ५२ वर्षीय पुरुषको भेन्टिलेटर अभावमा कार्तिकमा मृृत्यु भएको थियो । धरान १६ का एक ६० वर्षीय संक्रमितलाई असोजमा सास फेर्न गाह्रो भएर प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा लैजान परिवारजनले निकै कोसिस गरे । तर, अस्पतालले बेड खाली नभएको जानकारी गरायो । ती संक्रमितको राति नै घरमा मृत्यु भएको थियो ।
त्यस्तै धरान १५ का ६८ वर्षीय एक पुरुषको गत असोजमा अस्पताल लगिए पनि विराटनगर लाँदै गर्दा मृत्यु भयो । धरानमा मात्र बेड अभावका कारण ८ जनाको मृत्यु भएको त्यस बेलाको उपमहानगरको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको थियो ।
कोभिड अस्पताल सञ्चालन भएपछि बिरामीको उपचारलाई प्रभावकारी नबनाएको र उपचारमा संलग्न चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीलाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र खानपिनको उचित व्यवस्थासमेत नगरेको भन्दै प्रतिष्ठान व्यवस्थापनविरुद्ध चिकित्सकले यसअघि आन्दोलन नै गरेका थिए ।
प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक साहले समयमा शव व्यवस्थापन नहुँदा केही समस्या भएको स्वीकार गरे । सेनाले आएर उठाउनु पर्ने भएकाले ढिलाई भएको उनको भनाई छ । यस कामलाई व्यवस्थित गर्न अस्पताल प्रशासन, धरान उपमहानगरपालिका, नेपाली सेना र प्रहरी प्रशासन बसेर शव व्यवस्थापनबारे छलफल गराउने तयारी भएको उनको भनाई छ । डिएचयुबेड तयारी भइसकेको उनको दावी छ ।
कोरोना महामारीको वेला कोभिड अस्पतालको औषधि, मेसिन तथा उपकरण खरिदमा व्यापारीसँगको मिलेमतोमा उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको संलग्नतामा खरिद प्रक्रियाविपरीत कमसल सामान खरिद गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । अहिले पनि उपकुलपति गिरी अस्पतालको व्यवस्थापनमा भन्दा पनि आफ्नो पद बचाउन राजधानी धाइरहेका छन् ।
प्रतिष्ठानले पाउने अनुदान कोसी अस्पताललाई
कोभिड अस्पतालको अहिलेको हालत पनि उस्तै भएको त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी बताउँछन् । कोभिड– १९ अस्पतालका लागि ल्याइएका भेन्टिलेटरहरू तीन महिना पनि नपुग्दै बिग्रिएर उपचारमा आएका संक्रमितहरूलाई समस्या परेको थियो । खरिद नियमावली विपरित उपकुलपति डा .ज्ञानेन्द्र गिरीको मौखिक तोक आदेशमा ल्याइएका भेन्टिलेटरले त्यस बेला काम नगरेर निकै ठूलो आलोचना भएको थियो ।
कोरोना महामारीको वेला कोभिड अस्पतालको औषधि, मेसिन तथा उपकरण खरिदमा व्यापारीसँगको मिलेमतोमा उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको संलग्नतामा खरिद प्रक्रियाविपरीत कमसल सामान खरिद गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । अहिले पनि उपकुलपति गिरी अस्पतालको व्यवस्थापनमा भन्दा पनि आफ्नो पद बचाउन राजधानी धाइरहेका छन् । पदाधिकारीहरुसँग राम्रो मिलाप छैन । सबै पदाधिकारीहरु अस्पतालको व्यवस्थापन भन्दा पनि कुन व्यापारीलाई ठेक्का दिँदा कति कमिसन आउँछ भन्नेतिर नै ध्यान छ । पदाधिकारीहरु प्रतिष्ठानलाई आवश्यक सामाग्रीको ठेक्का लगाउने र मोटो कमिसनको चक्करमा ठेक्का रद्ध गर्ने तमासामा लागेको प्रतिष्ठानका एक अधिकृतले बताए ।
सरकारले अघिल्लो समय स्तरिय कोराना अस्पतालका लागि एचडियु २५ बेडको व्यवस्थापन गर्न २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट दिए पनि चरम दुरुपयोग भएपछि अख्तियार अनुसन्धान आयोगको छानविनमा परेको थियो । २५ लाखमा बन्ने २५ बेडको एचडियु बेड ठेक्का काठमाडौंको मेडिकल सोलुसनलाई २६ लाखमा दिइएको थियो । उपकुलपति डा. गिरीको संलग्नतामा गरिएको ठेक्काको विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म बजेट निकास भएको छैन ।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारी भ्रष्टचारमा लिप्त भएपछि प्रतिष्ठानलाई दिने बजेट कोशी अस्पताल विराटनगरमा एक सय बेडको डिएचयु बेड बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुदान दिएको छ । कोशी अस्पतालले १ सय बेडको कोभिड अस्पताल तयारी गरि सकेको छ ।
समन्वय नैं गदैनन् उपकुलपति
तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको आर्शिवाद पाएर उपकुलपति भएका डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी, कर्मचारीलगायत स्थानीय तह, प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगरेको आरोप छ । धरान उपमहानगरभित्र रहेको कोभिड अस्पताल व्यवस्थापनमा मेयर तिलक राईसँग समन्वय नगर्दा मेयर राईले केही समयअघि सार्वजनिक रुपमा उनको आलोचना गरेका थिए। आफ्नो स्थानीय तहमा भएको प्रतिष्ठानले कस्तो व्यवस्थापन गरेको छ । विरामीहरुको उपचारका कस्तो मापदण्ड अपनाएको छ भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधी प्रायः बेखवर हुने गरेका छन् ।
डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, उपकुलपति
माथि आफ्नो सेटिङ भएको भन्दैं उनले तलका कर्मचारी, पदाधिकारी तथा स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय नगरेको एक जनप्रतिनिधीले बताए। उपकुलपति गिरीको हठका कारण प्रतिष्ठान धरासायी बनेको र कोभिड अस्पतालमा धेरैको अकालमा ज्यान गएको कोभिड अस्पतलमा कार्यरत एक चिकित्सक बताउँछन् । हाल पनि उपकुलपति गिरी प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन छाडेर दुई साता लामो समय काठमाडौ बसेर आइतबार मात्र धरान फर्केका छन् ।
सबै पदाधिकारीहरुको कार्यालयमा चिकित्सक विद्यार्थीहरुले प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन तथा इन्टरनेट सेवामा भ्रष्टचार भएको भन्दै ६ दिनसम्म ताला लगाएर हिजो खोलिएको छ । रजिष्टारको कार्यालय भने यो समाचार तयार गर्दासम्म खोलिएको छैन। नेपाल न्यूजबाट साभारः
- २१ बैशाख २०७८, मंगलवार १७:४८ मा प्रकाशित